हाँसो ठट्टा गर्नेसँग भुतुक्कै हुन्छन् युवती – Saurahaonline.com
हाँसो ठट्टा गर्नेसँग भुतुक्कै हुन्छन् युवती
एजेन्सी : सामान्यतया युवा उमेर समूहका युवा युवती एक अर्कासँग आकर्षण हुन्छन् । केही व्यक्तित्व हेरेर, केही स्वभाव, अध्ययन आदी हेरेर आकर्षण हुने गर्छन् । तर एक अध्ययनका अनुसार हाँसो ठट्टा गर्ने युवासँग युवती बढी आकर्षित हुने गरेका छन् । अध्ययन अनुसार जुन युवक हाँसो ठट्टा र रमाइलो गरिरहन्छन् त्यस्ता युवक सँग युवतीहरु भुतुक्कै हुन्छन् ।
किन हुन्छन् त भुतुक्कै
बोर फिल हुँदैन स् ठट्टा गर्ने व्यक्ति रमाइलो स्वभावका हुनछन् । उनीहरुले कुनै न कुनै बहानामा अरुलाई हसाई रहेका हुन्छन् । उनीहरुको छेउमा बस्ने कसलाई पनि उनीहरुले बोर फिल हुन नै दिँदैनन् त्यसैले त्यस्ता प्रकारका युवक सँग युवतीहरु भुतुक्कै हुन्छन् ।
सामाजिक भावना स् प्राय हाँसो–ठट्टा गर्ने व्यक्ति निकै सामाजिक हुन्छन् । उनीहरु कुनै पनि परिस्थितीलाई सहजै राम्रो मजाक बनाइदिन सक्छन् । यस्ता गुण हुँदा पनि युवतीहरु त्यस्ता व्यक्तिको नजिक हुन मरिहत्ते गर्छन् ।
चुम्बन गर्दै जिब्रो चुडाल्ने महिला पक्राउ २०७६, २४ माघ शुक्रबार
एक परेवाको मूल्य १५ करोड ! २०७६, २३ माघ बिहीबार
बालीमा आँखा नलागोस् भन्दै पोर्न स्टारको पोस्टर ! २०७६, २२ माघ बुधबार
कुकुरले मान्छे टोके समाचार बन्दैन…तर गुप्ताङ्गमै टोके नि ! २०७६, ६ माघ सोमबार
नुनिलो भीर, जहाँ पाउँछन् गाउँले ‘नुन नै नुन’ २०७६, ५ माघ आईतवार
विश्व रेकर्ड कायम गरेको गैडा रहेन २०७६, १ माघ बुधबार
काठमाडौं : महानगरीय प्रहरी कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायव महानिरिक्षक (डिआईजी) विश्वराज पोखरेललाई प्रहरीको भावी.....